IPixel 3a kunye nePixel 3a XL: ezi kunokuba ngamaxabiso asemthethweni | I-Androidsis
Kancinci kancinci sifunda ngakumbi malunga neefowuni zikaGoogle ezintsha. Sele sikwazi ukumazi Iimpawu zokuqala zeGoogle Pixel 3a kunye neGoogle Pixel 3a XL Kwaye ngoku kubonakala ngathi sele siyazi ukuba baya kuxabisa malini. Ewe, ngomhambisi eCanada i Ixabiso elisemthethweni leGoogle Pixel 3a kunye neGoogle Pixel 3a XL. Ngaba ukuthenga kwakho kuya kufaneleka?
Sithetha ngeetheminali ezimbini ezigqityiweyo, eziya kuba nezinto ezothusayo, ngakumbi kwicandelo lokufota, kodwa eliya kuqhubeka ukuba ngamanyathelo amabini ngezantsi komgangatho ophezulu. Kutheni le nto be darn kangaka kubiza?
Ukuba eli lixabiso leGoogle Pixel 3a kunye neGoogle Pixel 3a XL, kubonakala ngathi kuthi ukuba uGoogle akazukuthengisa kakhulu
Ukuba ngumthombo waseCanada, sinokucinga ukuba ixabiso liya kusebenzisa imali yeli lizwe. Ke, i-64 GB kaGoogle Bonito, igama lekhowudi yeGoogle Pixel 3a XL, iya kuba nexabiso lama-euro angama-529, ngelixa i-64 GB kaGoogle Sargo, elingana neGoogle Pixel 3a, ingafikelela kwi-430 euros. Ewe sithetha ngamaxabiso esiwaqhelileyo kwisiphelo esiphakamileyo.
I-smartwatch kaGoogle ikhona: ezi patent Watch patents ziyangqina
Ingxaki kukuba ezi modeli ziphakamileyo ziya kuba nokuncinci: ukuqala, zombini iimodeli ziya kuba neprosesa IQualcomm Snapdragon 670 yePixel 3a kunye ne-710 yePixel 3a XL, iprosesa esulungekileyo kodwa enokuba ingezantsi kwabakhuphisana nayo. Kwaye ukuba sidibanisa kweli candelo lifotayo, ngelensi enye, singasathethi ke ngento yokuba bazakufika kwi-64 GB ye-RAM, ngelixa izisombululo ezitsha ezikolu luhlu lwamaxabiso sele zinamandla aphindwe kabini, asinakho ukuthengisa entsha eyenziwe ziifowuni zikaGoogle.
Ngokucacileyo, kuya kufuneka silinde intetho esemthethweni yeGoogle Pixel 3a kunye nePixel 3a XL, ezakuqhubeka ngaphakathi kwesakhelo senkomfa yenkampani yabakhi baseMelika ecwangciselwe iveki yokuqala kaMeyi, ukuqinisekisa amaxabiso asemthethweni, kodwa esikubonileyo ukuza kuthi ga ngoku kusiphoxile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ixabiso leGoogle Pixel 3a kunye nePixel 3a XL eCanada lihluziwe. Ngaba ukuthenga kwakho kuya kufaneleka?
I-Samsung Galaxy Fold sele inentengiso yayo yeTV
UXiaomi uza kuzisa iRedmi entsha kwiveki ezayo